वीरेठाँटी(कास्की), ९ चैत ।
अन्नपूर्ण गाउँपालिका ८ स्थित वीरेठाँटी युवा परिवारको आयोजनामा भएको फागु पूर्णिमा मेला शनिवार सकिएको छ ।
मेलाको मुख्य आकर्षणका रुपमा रहेको अन्तर गाउँपालिका वडा स्तरीय पुरुष भलिवल प्रतियोगिताको उपाधि मोदी गाउँपालिका–१, भुकको टोलीले जितेको छ ।उपाधि जितेसँगै उसले नगद रु. १ लाख १ हजार एक सय ११ साथमा शिल्ड, मेडल र प्रमाणपत्र पुरस्कार पाएको छ ।उपबिजेता बनेको मोदी गाउँपालिका–५, बाजुङको टोलीले रु. ५० हजार साथमा शिल्ड, मेडल र प्रमाणपत्रमा चित्त बुझाएको छ ।
क्लवका अध्यक्ष चन्द्रबहादुर गुरुङको अध्यक्षतामा भएको उक्त कार्यक्रम स्थानीय भुमे आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक तेजप्रसाद शर्माले संचालन गरेका थिए ।